Inona avy ireo fomba mahomby handrafetana tolotra fandresena ary hampitomboana ny varotra vokatra?
Raha te hiditra amin'ny tsena vaovao ianao na hanitatra ny orinasa, ny sehatra fivarotana Amazon manerantany no fotoana tsara indrindra ho anao sy ny tanjon'ny raharahambarotra. Raha misafotofoto ny toetr'andro izay tianao hanombohana ny orinasa ianao na tsy manana teti-bola ampy hananganana tranokala ecommerce, Amazon.com dia tena ilainao tokoa. Amazona no sehatra e-varotra ety anaty aterineto manerana izao tontolo izao izay manome fahatsapana fahagagana mahatalanjon'ny fifaninanana. Ary ny ampahany tsara indrindra amin'izany dia ny azonao omena azy amin'ny vidiny ambany na na dia maimaim-poana aza.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba hitantanana tsara ny Amazon Benefits ary hianatra tsara izay tadiavinao. Ho hitanao ireo torohevitra mahasoa ny fomba hamantarana ireo mpifaninana ambony ao amin'ny orinasa niche sy ny fanamafisana azy ireo. Manantena ny toro-hevitra hanampy anao hahomby amin'ny Amazon ary hampiroborobo ny orinasa. Andeha àry isika hiditra ao!
Ny mora indrindra
Amazon product sales tutorial fomba
hamaritana ny tsenan'ny toeram-pivarotana izay tianao hampiroboroboana ny raharahanao dia ny manamarina ny lisitry ny mpivarotra amboara Amazon. Raha efa nofinidinao ny tananao, azonao ampiasaina ny fampahafantarana tsara indrindra amin'ny findainao mba hamaritana ny vokatra mety hahaliana anao amin'ny tsenam-barotrao sy ny vokatra marobe amin'ny Amazon. Tsindrio ilay singa, azonao atao ny manamarina ny toerana misy azy eo amin'ny fivarotana sy ny fanombanan'ny mpampiasa azy. Mba hahazoana mari-pana maromaro kokoa, azonao atao ny mijery ireo sokajy ambany eo amin'ny ilany havia. Ireo sokajy ireo dia afaka manome anao fanazavana misimisy kokoa momba ny tsena voafantina ary mandanjalanja ny tsenan'ny tanjonao. Mety ho tsy misy sokajy hafa ho an'ny nichanao, fa mety hisy izany..Raha tsy izany, tandremo tsara ireo sokajy misy ireo, fa azony atao koa ny manome hevitra tsara momba anao.
Fantaro ny mpifaninana tsenanao TOP TSIM-PAHATAHANA
Raha hijery ny bestsellers, dia azonao atao ihany koa ny mamantatra ireo mpifaninana laharana voalohany. Azonao atao ny mahita ireo marika ao amin'ny Google ary manamarina ny fanomezana avy aminy. Ankoatr'izay, afaka manafina azy ireo ianao ary mividy ny vokatrao mba hanamarinana ny kalitaon'ny serivisiny sy ny fandefasana ny mpanjifany. Ankoatra izany, jereo ny zava-bitan'ireo mpifaninana ambony ao amin'ny aty Amazon amin'ny alàlan'ny fantsona sy ny amboara.
Fidio ny vokatra azo atao mba hivarotana amin'ny tsenanareo
Afaka manampy anao koa ny Amazon vokatra tokony hividy an'io. Ity fampahalalana azonao ity dia azonao avy amin'ny pejin'ny vokatra tsara indrindra. Azonao atao ny mahita ny vokatra azo avy amin'ny kalitao ambony sy ny vidiny ambany. Raha manao izany ianao, dia hikorontana ny mpifaninana aminao ary hampitombo ny vidin'ny vokatra Amazonanao.
Ny fikarohana Amazon, azonao fantarina ny zavatra tokony hampiasainao ao amin'ny tranokalan'ny fivarotana anao
. Afaka miantehitra tanteraka amin'io sehatra io ianao rehefa manao fitsapana sy fikarohana maro alohan'ny hanomezana valiny ny mpampiasa. Jereo àry ny pejin'ny bestseller ny vokatra ilainao ary tsindrio ny lahatsoratra tsara indrindra novidina avy amin'ny lisitra. Jereo eo ambanin'ny sary vokatra ao amin'ireo fizarana telo izay manaraka, ary hijery "fizarana matetika" fizarana, "ny mpanjifa izay nividy ity zavatra ity dia nividy ihany koa" fizarana ary "vokatra sponsored mifandraika amin'io lohahevitra io". Raha mijery ireo faritra ireo ianao, dia hahazo fampahalalana manan-kery ny fifaninanana Source .